Mogadishu Journal » Shacabka K. Kuuriya oo Diiday Soo Jeedin ka Timid Trump
Mjournal :-Shacabka Koonfur Kuuriya ayaa si weyn u diiday dalabka madaxweynaha Mareykanka ee ah in xukuumadda Seoul ay kordhiso qeybteeda lacagaha ku baxa askarta Mareykanka ee jooga dalkaasi. Waxayse muujiyeen iney niyad wanaag u hayaan mustaqbalka xiriirka labada dal.
Ra’yi aruurintan ayaa caddeyn u ah in kordhinta qarashka ay qeyb ahaan ku bixiso Koonfur Kuuriya joogista ciidanka Mareyka ay tahay mid aan siyaasad ahaan u wanaagsaneyn maamulka Madaxweyne Moon Jae-in ee dalkaasi.
Madaxweyne Trump ayaa in muddo ahba ku eedeeynayay Kuunfurta Kuuriya iyo wadamada kale ee xulufada ah iney ka faa’iideysanayaan Mareykanka. Wuxuu dhowr jeer ku celceliyey in Seoul ay u baahan tahay iney kor u qaaddo qeybta ay ka bixiso qarashaadka ku baxa askarta Mareykanka ee fadhiga ku leh dalkaasi